ktmkhabar.com - एप्पल कम्पनीले गर्यो विश्वभरका सबै स्टोर बन्द
भुलेर पनि नखानुहोस् दूधसँग यी चीज, नत्र स्वास्थ्यमा देखिन सक्छ जटिल समस्या !
आँखाको दृष्टि राम्रो बनाउन अपनाउनुस् यी उपाय !
बिहान उठ्ने बित्तिकै कागती पानी पिउनुको यस्ता छन् चमत्कारिक फाइदा !
बिजेन्द्र श्रेष्ठले दिए नगर सचिवमा उम्मेदवारी
अझै एमाले फुटाउने प्रयत्न हुन सक्छ – ओली
क्याडिजसँग बराबरीमा रोकियो बार्सिलोना
काठमाडौंबाट पोखरा जाँदै गरेको कार त्रिशूलीमा खस्यो, तीनजना बेपत्ता
गणेशजीको दर्शन गरी आजको राशिफल पढ्नुहोस् तपाईँको दिन सुभ हुनेछ
केपी ओली जस्तो गिदीमा गोबर भरिएको बुद्धि नभएको नेता अर्को देखेको छैन : प्रचण्ड
एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्दैन : प्रचण्ड
एमाले फुटाउन मेहनत परेको प्रचण्डको दाबी, माधव-झालनाथ प्रचण्ड सँग प्याक हुने सङ्केत !
सोमबार, चैत्र ३ २०७६
विश्वकै अग्रणी प्रविधि कम्पनी एप्पलले विश्वभरका आफ्ना स्टोरहरु बन्द गरेको जनाएको छ । कम्पनीका सिईओ टिम कुकले आधिकारीक स्टोरहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अमेरिकी कम्पनी एप्पलले यसअघि चीनमा रहेका आफ्ना स्टोरहरु शुक्रबार मात्र खुला गरेको थियो । चीनमा रहेका स्टोरहरु भने करिब दुई महिना बन्द भई शुक्रबार मात्र खुलेका हुन् ।
कम्पनीले चीनभन्दा बाहिरका सबै स्टोर बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । मार्च २७ सम्म ती स्टोरहरु बन्द रहने कुकले शनिबार जानकारी दिएका हुन् । यसैगरी कम्पनीले कोरोनाभाइरसको प्रकोपलाई नियन्त्रणमा सहयोग गर्न १५ मिलियन अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीले उच्च जोखिम निम्त्याएपछि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको एप्पलले जनाएको छ । स्टोर बन्द गरेपनि एप्पल वेबसाइटबाट सामान किन्न सक्ने वा अन्य अनलाइनमार्फत खरिद गर्न सकिने एप्पलले जनाएको छ ।
२० करोड रुपैयाँमा, स्टिभ जब्सले बनाएको पहिलो कम्प्युटर बिक्रीमा
हुवावेका अब बन्ने फोनमा फेसबुक नचल्ने
हुवावेको संकट झनै बढ्यो
बैङ्कहरूले बढाए ह्वात्तै ब्याजदर, कुन बैङ्कको कति बढ्यो
देउवा मध्यावधि चुनाव घोषणाको उत्तम साइत कुर्दै, प्रचण्ड लगायत नेताको हालत खराब